कोरोनाबाट निको भएपछि गर्नुहोस यी ६ काम, नत्र फेरी हुनेछ संक्रमण ! - NepalTrending
कोरोनाबाट निको भएपछि गर्नुहोस यी ६ काम, नत्र फेरी हुनेछ संक्रमण !
कोरोना भाइरसबाट ठिक भएपछि धेरै मान्छेको शरीरमा एंटीबडी बनिरहेको हुन्छ। यो एंटीबडीले शरीरलाई भाइरसबाट सम्पर्कबाट बचाउँछ। यधपी यो इम्यूनिटी शरीरमा कहिले सम्म रहन्छ, यस बारेमा बहस जारी हुनेछ।
अहिले यस्तो मामिला बाहिरिएको छ कि कोरोना लागेको व्यक्तिलाई ठीक भएपछि पनि कोरोनाबाट संक्रमित हुनेछ। कोरोना भाइरसबाट दोस्रोपटक संक्रमित हुने व्यक्ति कि त वृद्द हुन्छन भने कि त जसले यस भाइरसलाई लापरवाही गर्छ।
त्यस्तै मास्क, सामाजिक दुरी कायम र हात धुने नियम सबैको लागि हो, तर कोरोना भाइरसबाट ठिक भईसकेको मान्छेले विशेष कुरामा ध्यान राख्नुपर्नेछ। नियमित रूपमा एक्सरसाइज गर्नुहोला: कोरोना भाइरसबाट ठीक हुने प्रक्रियामा शरीर निकै कमजोर हुन्छ। यस्तैमा एक्सर्साइज गर्न निकै समस्या महसुस हुन्छ तर विस्तारै नियमित रूपमा एक्सरसाइज गर्नाले शारीरिक र मानसिक रूपबाट फिट रहनुहुनेछ।
पौष्टिक आहारको रुटीन बनाउनुहोला: आफ्नो खानामा धेरै भन्दा धेरै पौष्टिक चीज राख्नुहोला। यसले तपाईको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। कोरोना भाइरसको कारण धेरै मान्छेमा खाना कुराको इच्छा खतम कम हुन्छ जसकारण कमजोरी हुन्छ । आफ्नो डेली डाइटमा अर्गानिक प्रोडक्ट, हरियो तरकारी र अन्डा राख्नुहोस।
मेमोरी पावर: कोरोना भाइरसले मेमोरी सेल्सलाई नोक्सान पुर्याउँछ। आफ्नो मेमोरी बढाउनको लागी पजल्स वा कुनै गेम खेल्नुहोला।
बिस्तारै अगाडी बढ्नुहोस: कोरोना भाइरसको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि सामान्य जिन्दगी तर्फ आउन हतार नगर्नुहोला। ध्यान राख्नुहोस् कि तपाईले हालै भाइरससँग लडेर आउनुभएको हो।
लक्षण: कोरोनाबाट ठीक भएपछि यदि तपाईलाई टाउको दुखाई, थकान र कुनै पनि समस्या महसूस भयो भने आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोला।
अरुबाट मदत्त लिनुहोला: आफु ठीक हुने प्रक्रियामा दोस्रोलाई समिल गर्नुहोला। यस्तैमा कुनै पनि आरामको जरूरत पर्यो भने आफ्नो परिवार र साथीबाट सहयोग लिनुहोला।